जेठोबुढो धान किसानलाई प्रोत्साहन – Aarsee Times Weekly
आरसी टाइम्स २७ माघ २०७६, सोमबार February 10, 2020 296 Views
पोखरा महानगरले रैथाने धान बाली संरक्षणका लागि किसानहरुलाई उत्पादनमा आधारित अनुदान दिएको छ ।  जेठो बुढो जातको उत्पादकहरुलाई  प्रोत्साहन गर्न र बास्तविक किसानले अनुदान पाउने बातावरण मिलाउन उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली थालिएको महानगर प्रमुख मान बहादुर जीसीले बताए । हिजो पोखरा सभागृहमा आयोजित एक समारोहमा महानगरका २५ वडाका ९९ जना किसान समुह तथा फर्मलाई ५ लाख ६० हजार  अनुदान वितरण गरिएको कृषि तथा पशुविकास महाशाखा प्रमुख मनहर कडरीयाले बताए ।  यसरी अनुदान पाउनेहरुमा ४० वटा कृषक समुह र ५९ कृषि फर्म रहेका छन् ।  सहभागीताका हिसावमा  वडा नं. २० र २२ मा १० वटा समुहको दावी देखिएको छ भने  वडा २३ र २९ मा ८ समुहको दावी देखिएको छ ।
गत असोज महिनामा महानगरले कृषकहरुबाट रैथाने धान बाली जेठोबुढो खेतिगर्ने किसानहरुबाट अनुदान दावीका लागि आव्हान गरेको थियो । किसानहरुको मागदावीका आधारमा खेति अवलोकन र धानको उत्पादकत्व समेत सर्भेक्षण गरीएको महानगरले जनाएको छ । कम्तीमा ५ रोपनीमा धान खेतिगर्ने किसानहरुका लागि आयोजित अनुदान अभियानमा महानगरका ९९ समुह र फर्म मध्ये ५ रोपनी देखि २७० रोपनीमा खेति गरेको दावी गरेका छन् ।
महानगरको यो अभियानको आँकडामा सहभागी किसानहरुले १८२९ रोपनीमा रैथाने जेठो बुढो धान खेति गरेर ६०९५ मुरी धान फलाएको दावी गरेका छन् । धान खेतिको उत्पादकत्वका हिसाबमा प्रति हेक्टर ४ मेट्रिक टनसम्म फलाएको दावी पेश गरेका छन् । महानगरले प्रति रोपनि ५० केजीसम्म धान फलाउनेलाई रु ९० का दरमा अनुदान दिउको छ भने १० केजी धान फलाउनेलाई रु १०० का दरमा तथा १५० केजी फलाउनेलाई रु. १५० र २०० केजीका दरमा फलाउने किसानलाई रु. २०० का दरमा अनुदान वितरण गरेको जनाएको छ । किसानहरुको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न महानगरले सघाउने दावी गर्दै महानगर प्रमुख जीसीले किसान कोशेली घर सञ्चालन गर्न र रैथाने धानको चामल विक्रि गर्ने परिपाटी बसाल्न किसानहरुलाई आग्रह गरे ।